मिति र पात्रोको हिसाब गर्ने तरिका | Loksewa.org
३० चैत्र २०७६, आईतवार २२:५४
१) वर्षमा ३६५ दिन हुन्छ भने Leap Year मा ३६६ दिन हुन्छ ।
२) Leap Year भएको Feb. महिना २९ दिनको हुन्छ भने अन्य वर्षको Feb. महिनामा २८ दिन हुन्छ ।
३) कुनै पनि वर्षको पछाडीको दुई अंकलाई ४ ले निशेष भाग जान्छ भने त्यो Leap Year हुन्छ । जस्तै २००४, २००८,२०१२ आदी ।
४) शताब्दीहरुमा अगाडीको दुई अंकलाई ४ ले निशेष भाग गएको अवस्थामा त्यो शताब्दी Leap Year हुन्छ । जस्तै २०००, २४००,१६०० आदी ।
५) पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा एक परिक्रमा लगाउन ३६५ दिन ५ घण्टा र ४८ मिनेट लाग्ने हुनाले Leap Year को सृजना हुन्छ ।
६) बारको हिसाव गर्दा Year Ascending Order मा दिएमा शेषलाई जोड्ने (+) Descending Order मा दिएमा दिएको बारबाट घटाउनु (-) पर्दछ
७) हरेक वर्ष ३६५ दिनको हुन्छ । त्यसलाई ७ ले भाग गर्दा शेष १ बाँकी रहन्छ । Leap Year मा शेष २ बाँकी रहन्छ । त्यसैले Same day दिएर Year फरक पारेर Question दिएमा दिएको दुइ Year घटाउने र Leap Year संख्या जोडेर आउने संख्यालाई दिएको बार मा (+-) गरेमा सोधेको बार आउछ । जस्तै २०१३ Jan 1 sunday भएमा 2029 Jan 1 कुन बार हुन्छ ?
८) वर्षमा हुने दिन सम्झनका लागि हातको औलाको डिलमा गन्न सकिन्छ । पहिलो (अग्लो भाग) ३१ दिनको हुन्छ भने होचो भाग ३० दिनको हुन्छ । Feb. महिना जहिले पनि अपवाद हुन्छ ।
९) Same Year मा Month को day फरक पारेर कुन बार भनेर सोधेमा दिएको अवधिमा कति दिन हुन्छ Count गरेर ७ ले भाग गर्ने आएको शेष दिएको बारमा (+-) गर्ने त्यो बार हुन्छ । जस्तै 2013 Jan 24 wednesday भए May 21 कुन बार हुन्छ ?
१०) Year र Month दुबै फरक पारेर दिएमा दिएको महिना विचको दिनको सं्ख्या + दिएको Year विचको Difference + Leap Year को संख्याको योगलाई ७ ले भाग गरेर आउने शेषलाई दिएको बारमा (+-) गर्ने । जस्तै 2013 Jan 10 sunday भए 2015 dec 10 कुन बार हुन्छ ।
११) पात्रो कुन Year को पात्रोसंग हुबहु मिल्छ भन्ने प्रश्नमा विचमा Leap Year कति परेको छ त्यसलाई दिएको दुई वर्ष घटाएर आउने संख्यासँग जोडेर ७ ले भाग गर्दा शेष ० भएमा त्यो वर्ष हुबहु मिल्छ ।जस्तै 2007 को पात्रो कुन वर्षको पात्रोसँग हुबहु मिल्छ ? a) 2013 b) 2015 c) 2018 d) 2020
१२) Year र day मात्र दिएर प्रश्न सोधेमा आजको मितिलाई आधार मानेर हल गर्ने । जस्तै 2031 sep 11 मा कुन बार पर्छ ।
१३) भोलीको पर्सि आजको अस्ती जस्तो प्रश्नमा आजलाई आधार मानेर Circle को आधारमा बार निकाल्नु पर्छ । भोली भविष्यकाल भएकोले Clockwise र अस्ती भूतकाल भएकोले AntiClockwise हुन्छ ।